Lapho phesheya, sonke siyalithanda ithuba lokuyothenga thina, umndeni nabangane! Kuzwakala ezahlukene kwelinye izwe, akunjalo? Uma kuziwa Europe, yezitolo akusho ukudanisa. Akukona nje kuphela babe abadumile yezitolo emadolobheni ezifana eLondon Milan, Ibuye ibe nezitolo ezinkulu eziningi ezinikeza izaphulelo ezinkulu emgwaqweni ophakeme kumikhiqizo yokunethezeka esezingeni eliphakeme. Ngezansi thina imininingwane 5 Of The Best Ukuthenga Izitolo EYurophu.
Thola esiyingqayizivele shopping nakho siyilungiselelo ezivulekile eLa Vallee Village eziseduze nase-Paris. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka- 110 boutiques emfashini owaziwa umhlaba wonke. Kukhona futhi izinhlobo yokuphila ukunikela isizini iqoqo zabo zangaphambili ngamanani encishisiwe, unyaka wonke.
Uhla Kuhle Ukuthenga Izitolo Europe abakwazi ukushiya ngaphandle Milan! Uma ufuna ukuthenga okuphezulu, IMilan ivame ukuba phezulu ohlwini lwabantu abaningi. Ingabe bewazi ungathola ezisendalini bethenga yakho uphawu kakhulu? Vakashela Serravalle Umklami Outlet for izaphulelo kuma big futhi okusezingeni eliphezulu emgwaqweni imfashini brand.
Thola eliphezulu umklami European imfashini, ifenisha, noma izesekeli zasekhaya ze 30% ukuze 60% Ngaphansi. Izinsuku Abaklami evutha isivuno sisiningi kakhulu khona futhi zonyaka zabo okusele are kade laphela. Factory ezitolo manje ngokuvamile ugcwele phakathi olunothile amadolobha amancane kuya kwamaphakathi. Kanye emhlabeni amadolobha futhi, ngoba bonke obaziyo, mhlawumbe kwesokudla kamakhelwane! I-picnic nesikhwama esisha noma ngubani?
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Of The Best Ukuthenga Izitolo EYurophu” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-shopping-outlets-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)